ကြိတ်ကြိတ်တိုး စည်တဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရ မြေကွက်ရောင်းပွဲ
ကြိတ်ကြိတ်တိုး စည်တဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရ မြေကွက်ရ...
8 ต.ค. 2562 - 00:45 น.
တချို့မြေကွက်တွေက အပြင်ပေါက်ဈေး ထက်နဲ့ မကွာသလို အချို့နေရာ တွေ ဟာ သိန်း၆၀ လောက် မပေါက်တဲ့နေရာတွေလည်းပါတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လျှောက်လွှာစရောင်းတဲ့ ပထမနေ့ တစ်ရက်တည်းကို ပဲ လူ နှစ်ထောင် ခန့်လာဝယ်ခဲ့တယ်လို့ လည်း သိရပါတယ်။
ငွေကို ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားစာရသည့်နေ့ကနေ(၆)လအတွင်း အကြေပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပြီး
မြေရပြီး (၆)လအတွင်း အဆောက်အဦးဆောက်ပြီးပါက ဂရန်ရရှိရေးဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ကြိတ်ကြိတ်တိုး စည်တဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရ မြေကွက်ရောင်းပွဲ